विद्यालय भवन पहिरोले बगाएपछि विद्यार्थीहरुको बिचल्ली ! « News24 : Premium News Channel
विद्यालय भवन पहिरोले बगाएपछि विद्यार्थीहरुको बिचल्ली !
बझाङ । तल्कोट गाउँपालिका–३ को विश्वनाथ आधारभूत विद्यालयको दुई कोठे पक्की भवन पहिरोले पुरेपछि विद्यार्थीहरुको बिचल्ली भएको छ । उनीहरु खुला ठाउँमा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन् । कक्षा कोठाभित्र बसेर पढ्ने रहर भए पनि भत्केको कोठा नबन्दा खुल्ला स्थानमै पढ्न बाध्य भएको कक्षा ४ की उमा चदाराले बताइन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तल्कोट गाउँपालिकाले विद्यालय भवन बनाउन भनेर १६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । सुरुमा ८ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको दुई कोठे भवन पहिरोले भत्काएको छ । अरु कोठा पनि बनाउने तयारी भइरहँदा पहिले बनाएको भवन नै भत्किएपछि समस्या भएको शिक्षिका चम्पा सुवर्णकारले बताइन् ।
कक्षा ४ सम्म पढाई हुने यो विद्यालयमा ८३ जना विद्यार्थीहरुले पढ्दै आएका छन् । घाम लाग्दा हावाहुरी आउने र पानी पर्दा बस्ने कक्षा कोठा नभएका कारण हाफछुट्टीमा घर फर्किने गरेको कक्षा ४ मा पढ्ने अजय रोकायले बताए ।
विद्यालय भवन नभएपछि कक्षा १ देखि ४ सम्मका सबै विद्यार्थीहरु एउटै कक्षामा राखेर पढाउने गरिएको छ । ठाउँ अभावका कारण राम्रोसँग पढाई नहुने भएकाले धेरै बालबालिका विद्यालय आउनै छोडेको प्रधानाध्यापक बिर्खराज जोशीले बताए । आफूले विद्यालय बगाएको दिनदेखि नै वडा कार्यालय, गाउँपालिका र शिक्षा शाखालगायत सबै ठाउँमा हारगुहार गरे पनि कुनै निकायले सुनुवाई नगरेको उनको गुनासो छ ।
विद्यालय रहेको ठाउँभन्दा माथिबाट चैनपुर तक्लाकोट सडक निर्माण भएको र सडककै कारण वर्षाको समयमा पहिरो जाँदा विद्यालयमा क्षती भएको विद्ययालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यज्ञराज रोकायले बताए । पहिरोले दिवाखाजाको घर, चर्पी र खेल मैदानमासमेत क्षती पु¥याएको छ ।
अझै पनि पहिरोको जोखिम देखिएकाले विद्यालयलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था आएको र त्यसका लागि कुरा भैरहेको वडाध्यक्ष भरत बोहराले बताए । आफैं प्रदेश सरकार समक्ष पुगेर विद्यालयको अवस्थाबारे लिखित र मौखिक रुपमा समेत जानकारी गराईसकेको उनको भनाई छ ।
तल्कोट गाउँपालिका वडा नं ३ अन्तर्गतको बस्टी गाउँसमेत पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ । गाउँभन्दा माथिबाट चैनपुर ताक्लाकोट सडक निर्माणको क्रममा रहेको र गाउँको तलबाट सेती नदीले कटान गर्न थालेपछि जोखिम बढेको हो । वर्षातको समयमा सडक खन्ने क्रममा फालेको माटोले पहिरोको रुप लिएकोले गाउँ माथिबाट खेत तथा घरमा क्षति पुर्याउन थालेकोे छ ।
नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै पहिरो खस्न सुरु गर्छ । कहिलेकाहीँ दिन बिराएर सुख्खा पहिरो खस्ने गरेको बस्तीका मुखिया कलकबहादुर रोकायले बताए । यस विषयमा गाउँपालिकामा जानकारी गराएको र तटबन्धको लागि पहल गरिदिन विभिन्न निकायलाई भनेको वडाध्यक्ष भरत बोहराले बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकाको बजेटले धान्न नसक्ने अवस्था छ, अब केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग पहल गरेर गाउँको जोखिम कम गर्न प्रयास गर्नुपर्ने छ ।’